एउटा धाराको एक महिनाको बिल ४८ हजार !
मुख्य पृष्ठप्रदेश समाजएउटा धाराको एक महिनाको बिल ४८ हजार !
सखुवासभा, असोज १६
एउटा धारामा एक महिना पानी प्रयोग गरेको महसुल ४८ हजार रुपैयाँ उठ्यो भन्ने सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । नलागोस् पनि कसरी, हदै भए एक महिनाको पानीको बिल पाँच हजारसम्म उठ्न सक्छ । तर, यो वास्तविकता हो । जिल्ला कारागार खाँदबारीको भदौ महिनाको पानीको बिल ४८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ उठेको छ ।
मिटर बिग्रेको हो कि भनेर नयाँ मिटर जडान गर्दासमेत महसुल नघटेको कारागारका प्रमुख विनोद अधिकारीले बताए । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि भदौ महिनामा ४६ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ उठेको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले जडान गरेको धारामा पानीको सट्टा हावा आउँदा पनि मिटर घुम्ने भएकाले पानीभन्दा हावाको शुल्क तिर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामुकमार सारु मगरको भनाइ छ । ‘हावाको पैसा कसरी तिर्ने ?,’ उनले भने, ‘हामीले गाडी र ट्याङकरबाट पानी बोकेर काम चलाइरहेका छौं ।’ यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै असार महिनामा २६ हजार ७ सय रुपैयाँ उठेको थियो । खाँदबारी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गत साउनदेखि खानेपानीको शुल्कमा ५३ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि पानीको महशुल यसरी बढेको हो ।
खादबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई सस्थाका अनुसार न्यूनतम पाँच युनिटसम्म प्रतिमहिना १ सय ५० रुपैयाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले शुल्क वृद्धिपछि २ सय ३० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । ६ देखि १० युनिटसम्म प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँ तिर्दै आएकाले अहिले ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ११ देखि २० युनिटसम्म प्रतियुनिट १ सय ५ पुगेको छ ।
मासिक ५ सय तिर्दै आएका खाँदबारी–३ का उपभोक्ता छत्रमणि ओझाले तीन हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको गुनासो गरे । खानेपानीको महशुल बढेपछि उपभोक्ताहरुले आफुहरुसंग छलफल नै नगरी शुल्क बढाएको भन्दै समितिलाई दवाब दिन हस्ताक्षर बुझाइ सकेका छन् ।
संस्थाले तीन हजार ५ सय ९९ उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेपनि हालसम्म दुई हजार वटा मात्र धारा जडान गरेको छ । आयोजना निर्माणको चरणमा पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुदाँ २५ प्रतिशत खर्च बढेकाले नगर विकास कोषसँग ऋण सम्झौता गर्दा शुल्क वृद्धि गर्ने सहमति गरिएको संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र राईले बताए । शुल्क वृद्धि नगरिए थप ऋण नदिने भएपछि शुल्क बढाइएको उनको भनाइ छ । अहिले भेरिएसन अर्डर र मूल्य समायोजनसहित आयोजनाको खर्च रकम करिब ४६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।